रुबिना क्षेत्री , क्रिकेटर- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
सबैभन्दा खुसी भएको दिन ?मेरो नेतृत्वमा भएको खेलमा नेपाललाई जिताउन पाउँदा ।
सबैभन्दा खुसी भएको दिन ?
मेरो नेतृत्वमा भएको खेलमा नेपाललाई जिताउन पाउँदा ।
तीन शब्दमा तपाईं कस्तो मान्छे ?
राम्रो खेलाडी, भद्र र अनुशासित ।
चाँडै रिसाउँछु ।
के कुराले बढी रिस उठ्छ ?
कसैले पनि आफ्नो दायित्व भुलेर अनावश्यक काम गर्‍यो भने रिसाउँछु ।
आफ्नो नाम फेर्न पाए के राख्नुहुन्थ्यो ?
मेरो आमाले राखिदिएको नाम भएकाले यसलाई चेन्ज गर्दिनँ ।
एउटा वर माग्न पाए के माग्नुहुन्थ्यो ?
मैले खेल्ने हरेक टुर्नामेन्टमा नेपभलमर्य विजयी बनाउन सकूँ ।
प्रलय आयो र तपाईं मात्र बाँच्नुभयो भने के गर्नुहुन्थ्यो ?
कोही नहुँदा एक्लै कसरी बाँच्ने । म पनि मर्थें ।
काठमाडौंको एक राम्रो र एक नराम्रो पक्ष के हुन् ?
यहाँ खोजेका सबै सुविधा उपलब्ध छन् । तर बढी भीड र प्रदूषण नराम्रा पक्ष हुन् ।
घुम्नलाई तीन ठाउँ ?
पोखरा, धरान र इलाम ।
तपाईसँग टाइम कन्ट्रोल मेसिन भए के गर्नुहुन्थ्यो ?
मेरो सबैभन्दा राम्रो समयलाई त्यही रोक्थे र त्यसलाई मज्जाले इन्जोय गर्थे ।
आर्यन सिग्देल या सलमान खान ?
अफकोर्स सलमान खान ।